IHydrocortisone vs. i-cortisone: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe - Izidakamizwa Vs. Umngani | Septhemba 2021
Izidakamizwa Vs. Umngani Umphakathi Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Inkampani Izindaba, Wellness Imidlalo Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Umphakathi, Ukuphila Kahle Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Umphakathi, Inkampani Inkampani, The Checkout Ezemidlalo Ezisindayo Izilwane Ezifuywayo Inkampani, Izindaba
Main >> Izidakamizwa Vs. Umngani >> IHydrocortisone vs. i-cortisone: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
IHydrocortisone vs. i-cortisone: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
Uma kukhulunywa ngama-steroids, i-hydrocortisone ne-cortisone yizinketho ezimbili udokotela wakho angazincoma. I-Hydrocortisone ne-cortisone ngama-corticosteroids amancane asetshenziselwa ukwelapha izimo zesikhumba, izifo ze-rheumatic, kanye nokuphazamiseka kwe-adrenal.
I-Hydrocortisone ne-cortisone yizinto ezenziwe ngabantu ze-corticosteroid ezilingisa imiphumela yamahomoni ama-steroid akhiqizwa ngokwemvelo emzimbeni. Ama-hormone e-steroid akhiqizwa yi-adrenal gland yi-mineralocorticoid (aldosterone), edlala indima ekugcineni uketshezi, kanye ne-glucocorticoid (cortisol), enemiphumela yokulwa nokuvuvukala.
Ngaphandle kokufana kwabo ukuthi basebenza kanjani, i-hydrocortisone ne-cortisone banokuhluka ngamandla, ukwakheka, nokusetshenziswa.
Uyini umehluko omkhulu phakathi kwe-hydrocortisone vs. cortisone?
IHydrocortisone (Iyini iHydrocortisone?)iyi-corticosteroid ejwayelekile etholakala ngaphezu kwe-counter (OTC) noma ngencwadi kadokotela. Amagama omkhiqizo we-hydrocortisone afaka phakathi i-Cortef, i-Cortizone, i-Anucort-HC, ne-Preparation H. I-Hydrocortisone iyatholakala njengethebhulethi yomlomo, ukhilimu we-topical, i-lotion ye-topical, ne-topical ointment. Kuza futhi njenge-suppal rectal.
ICortisone(Yini iCortisone?) Iyi-generic corticosteroid etholakala kuphela ngomuthi kadokotela. ICortisone ithathwa njengethebhulethi yomlomo futhi kwesinye isikhathi yaziwa ngegama layo lomkhiqizo, iCortone. Uma kuqhathaniswa ne-hydrocortisone, i-cortisone ayinamandla kangako. Lokhu kungenxa yokuthi i-cortisone ngokwayo ayisebenzi. Ngemuva kokuphathwa, i-cortisone iguquka ibe yi-hydrocortisone, noma i-cortisol, esibindini.
Umehluko omkhulu phakathi kwe-hydrocortisone vs. i-cortisone
Isigaba sezidakamizwa ICorticosteroid ICorticosteroid
Isimo somkhiqizo / ejwayelekile I-Brand ne-generic iyatholakala Okujwayelekile kuyatholakala (igama lomkhiqizo alisebenzi)
Ngubani igama lomkhiqizo? ICortef, Hydrocort, Cortizone, Ala-Cort, Anucort-HC, Ukulungiselela H ICortone
Izidakamizwa zingena ngaziphi izinhlobo? Ithebhulethi yomlomo
Ukhilimu ofiphele Ithebhulethi yomlomo
Uyini umthamo ojwayelekile? Isikali somlomo: 20 kuya ku-240 mg ngosuku, kuya ngesimo esiphathwayo kanye nempendulo yomuntu emithini
Isihloko: Faka endaweni ethintekile izikhathi ezi-2 kuye kwezingu-4 ngosuku Isikali somlomo: 35 kuya ku-300 mg ngosuku, kuya ngesimo esiphathwayo kanye nempendulo yomuntu emithini
Yelashwa isikhathi esingakanani? Isikhathi sithatha isimo esiphethwe, kodwaUkusetshenziswa kwezihloko ze-OTC akukho ngaphezu kwezinsuku eziyi-7 Isikhathi esixhomeke esimweni esiphethwe
Ubani ovame ukusebenzisa umuthi? Abantu abadala nezingane ezingaphezu kweminyaka emibili Abantu abadala
Izimo eziphathwa yi-hydrocortisone vs. i-cortisone
Kokubili i-hydrocortisone ne-cortisone kungasetshenziswa ukwelapha ukuvuvukala okuvela ezimeni ezahlukahlukene. Lawa ma-corticosteroids angasiza ekwelapheni ukuvuvukala okuvela ezimeni zokungezwani komzimba, izimo zokuphefumula, izifo zesisu, izifo ze-adrenal gland, kanye nezimo ze-rheumatic. Njengoba i-steroids ivame ukusetshenziselwa ukukhomba izimpawu zokuvuvukala, zingasetshenziswa kanye nezinye izidakamizwa ezelapha umthombo wenkinga.
I-topical hydrocortisone i-FDA ivunyelwe ukuphatha i-dermatitis yokuxhumana noma ukuvuvukala kwesikhumba ekuphendukeni komzimba. I-Hydrocortisone nayo ingasetshenziswa ekwelapheni ukucasuka kwesikhumba nezimpawu zokulunywa ngemuva kokuhlangana nayo I-poison ivy noma i-oak enobuthi. Okwalabo abahlangabezana nokusabela okungalungile ku- ukulunywa yizinambuzane , ama-corticosteroids ama-topical afana ne-hydrocortisone angasiza ekunciphiseni ukulunywa nokuvuvukala.
Isimo I-Hydrocortisone ICortisone
Izinkinga zesikhumba (thinta i-dermatitis, i-atopic dermatitis) Yebo Yebo
Izimo zamathumbu (ulcerative colitis, isifo sikaCrohn) Yebo Yebo
Izimo ze-rheumatic (i-arthritis, i-lupus) Yebo Yebo
Izinkinga ze-adrenal gland (ukungakwazi ukusebenza kahle kwe-adrenal noma isifo se-Addison) Yebo Yebo
Izifo ze-oncologic (iHodgkin lymphoma, i-leukemia engapheli ye-lymphocytic) Yebo Yebo
Izimo zokuphefumula (i-pneumonia) Yebo Yebo
Ezinye izimo zokuvuvukala (ukungezwani komzimba, ukukhuphuka kwesifuba somoya) Yebo Yebo
Ingabe i-hydrocortisone noma i-cortisone isebenza kangcono?
I-Hydrocortisone inamandla kancane kune-cortisone. Uma kuqhathaniswa amanani, ama-1.25 milligram we-cortisone alingana no-1 milligram we-hydrocortisone. ICortisone ayisebenzi ize ibe yi-hydrocortisone ngokucubungula esibindi. Njengoba i-cortisone ngokuyisisekelo i-hydrocortisone, kepha ngesinyathelo esingeziwe esidingekayo ukuyenza isebenze, ayinqunyelwe kaningi.
ukuvimbela kanjani imvubelo ukutheleleka kusuka kuma-antibiotic
Njengamanje, azikho izivivinyo zokwelashwa eziqhathanisa ngqo i-hydrocortisone ne-cortisone yesimo esithile. Uma kuqhathaniswa namanye ama-corticosteroids afana umabhebhana futhi umagazine , i-hydrocortisone ne-cortisone ziyasebenza futhi zisebenza okwesikhashana. Uma kuqhathaniswa namanye ama-corticosteroids angama-topical, i-topical hydrocortisone ibhekwa njenge- amandla aphansi i-corticosteroid.
Kunconywa ukuthi uthintane nomhlinzeki wezokunakekelwa kwezempilo ukuze uthole iseluleko sezokwelapha ngaphambi kokuthenga i-OTC hydrocortisone. Ngaphandle kwalokho, kuyadingeka ukuvakashela udokotela ukuze uthole incwadi kadokotela ye-hydrocortisone noma amaphilisi e-cortisone.
Thola ikhadi lesaphulelo sakwaSingleCare
Ukuhlanganiswa nokuqhathaniswa kwezindleko kwe-hydrocortisone kuqhathaniswa ne-cortisone
Izinhlobo ezijwayelekile ze-hydrocortisone ngokuvamile zihlanganiswa yi-Medicare nezinye izinhlelo zomshuwalense. IHydrocortisone nayo ingatholwa ngaphezu kwekhawunta ukuze lokhu kungathinta ukumbozwa kwezinhlelo ezithile. Ishubhu likakhilimu we-hydrocortisone lingasebenza ngokungafika ku- $ 30. Uma unencwadi kadokotela futhi usebenzisa ikhadi lesaphulelo, njenge Ikhadi le-SingleCare , i-hydrocortisone ingabiza ngaphansi kuka- $ 5.
Amaphilisi e-Cortisone angathengwa kuphela ngomuthi kadokotela ovumelekile. Iningi le-Medicare nezinhlelo zomshuwalense zizohlanganisa i-cortisone ejwayelekile. Izindleko ezijwayelekile zokuthengisa ze-cortisone zingafinyelela ku- $ 102. Ungasebenzisa futhi i- Ikhuphoni le-singleCare cortisone ukukhokha cishe ama- $ 85 ngenani lamathebulethi angama-30.
Ngokuvamile embozwe umshwalense? Yebo Yebo
Imbozwe ngokwejwayelekile yi-Medicare Part D? Yebo Yebo
Umthamo ojwayelekile 20 kuya ku-240 mg ngosuku ihlukaniswe ngamanani ahlukene 25 kuya ku-300 mg ngosuku ihlukaniswe ngemithamo ehlukile
I-Medicare copay ejwayelekile $ 1– $ 5 $ 1– $ 90
Izindleko ze-SingleCare $ 5 + $ 85 +
Imiphumela emibi ejwayelekile ye-hydrocortisone vs. cortisone
I-Hydrocortisone ne-cortisone, njengamanye ama-corticosteroids, angadala imiphumela emibi efanayo. Imiphumela emibi ejwayelekile ye-hydrocortisone ne-cortisone ifaka ikhanda, isiyezi, ukujuluka okwandayo nokuxubha isikhumba. Eminye imiphumela emibi ingafaka ukuphola kokulimala kwesilonda, ubuthakathaka bemisipha, nomfutho wegazi ophakeme. Ukusetshenziswa kwama-corticosteroids nakho kungaholela ekugcinweni kwe-sodium noketshezi, okungabonakala njengokuzuza kwesisindo.
Imiphumela emibi ye-corticosteroids ifaka ukusabela okweqile noma i-anaphylaxis. Ingozi yemiphumela emibi ihlotshaniswa nomthamo nobude besikhathi sokwelashwa. Ngalesi sizathu, i-hydrocortisone ne-cortisone azinconyelwe ukusetshenziswa kwesikhathi eside. Uma isetshenziselwa isikhathi eside, ama-corticosteroids angaholela engozini eyengeziwe ye- ukukhumuzeka kwamathambo , noma ukulahleka kwethambo, kanye nokungajwayelekile emgodini we-adrenal.
Ubuhlungu bekhanda Yebo * Yebo *
Isiyezi Yebo * Yebo *
Ukujuluka okwengeziwe Yebo * Yebo *
Ukuqhuma kwesikhumba Yebo * Yebo *
Ukupholisa ukulimala kwesilonda Yebo * Yebo *
Ubuthakathaka bemisipha Yebo * Yebo *
Umfutho wegazi ophezulu Yebo * Yebo *
Ukugcinwa kwesodium noketshezi Yebo * Yebo *
Ukwenyuka ushukela wegazi Yebo * Yebo *
Lokhu kungenzeka kungabi uhlu oluphelele lwemiphumela emibi engenzeka. Sicela ubheke udokotela wakho noma umhlinzeki wezokunakekelwa kwempilo ukuze ufunde kabanzi.
Umthombo: DailyMed ( I-Hydrocortisone ), IDailyMed ( ICortisone )
Ukusebenzisana kwezidakamizwa kwe-hydrocortisone kuqhathaniswa ne-cortisone
I-Hydrocortisone ne-cortisone zicutshungulwa esibindini yi-CYP3A4 enzyme. Izidakamizwa ezivimba, noma ezivimbela le enzyme zingakhuphula amazinga e-hydrocortisone noma ama-cortisone futhi zikhuphule ubungozi bemiphumela emibi. Ngendlela efanayo, izidakamizwa ezishukumisa, noma ezenza ukuthi le enzyme yehle amazinga e-hydrocortisone noma ama-cortisone futhi yehlise ukusebenza kwayo konke.
I-Hydrocortisone ne-cortisone zingasebenzisana nama-CYP3A4 inhibitors afana ne-erythromycin, i-clarithromycin, i-isoniazid, ne-ketoconazole. I-Hydrocortisone ne-cortisone nazo zingasebenzisana nama-inducers we-CYP3A4 afana ne-rifampin, i-carbamazepine, ne-phenobarbital.
Njengoba i-corticosteroids ingakhuphula amazinga kashukela egazini, i-dosing ingadinga ukulungiswa ngenkathi ithatha izidakamizwa ezilwa nesifo sikashukela . I-Corticosteroids nayo ingathinta amazinga egazi e-aspirin kanye nama-anticoagulants afana ne-warfarin.
ICorticosteroids ingacindezela amasosha omzimba. Ngakho-ke, imithi yokugoma ebukhoma kufanele igwenywe ngenkathi ithatha i-corticosteroids ngenxa yengozi eyengeziwe yokutheleleka.
ungaphatha kanjani imvubelo yesilisa phezu kwekhawunta
Izidakamizwa Isigaba Sezidakamizwa I-Hydrocortisone ICortisone
I-Rifampin Imithi elwa namagciwane Yebo Yebo
Ketoconazole I-Antifungal Yebo Yebo
Phenytoin I-Anticonvulsant Yebo Yebo
I-Aspirin I-Antiplatelet / iSalicylate Yebo Yebo
I-Rosiglitazone I-Antidiabetic Yebo Yebo
Umuthi wokugomela umkhuhlane bukhoma
Umuthi wokugoma we-MMR Umuthi obukhoma Yebo Yebo
Thintana nochwepheshe wezokunakekelwa kwempilo mayelana nokunye ukuxhumana kwezidakamizwa okungenzeka.
Izexwayiso nge-hydrocortisone vs. i-cortisone
Ukuhlala kuma-corticosteroids isikhathi eside kungathinta ukuthi indlala ye-adrenal ikwazi kanjani ukukhiqiza ama-hormone e-steroid eyedwa. Lokhu kungaholela ekusweleni kwe-adrenal yesibili, okuvamile ngemuva kokuyeka ukwelashwa ngokungazelelwe. Ngakho-ke, ukwelashwa ngama-corticosteroids kufanele kuthathwe kancane ukuze kugwenywe ukuhoxa okungenzeka.
kuphephile ukuthatha i-tylenol lapho ukhulelwe
I-Corticosteroids kufanele isetshenziswe ngokuqapha uma unokulimala kwesibindi (i-cirrhosis) noma i-thyroid engasebenzi ( i-hypothyroidism ).
I-Corticosteroids ingavimbela ukukhula nentuthuko ezinganeni. Ezimweni eziningi, i-hydrocortisone ne-cortisone kufanele kugwenywe ezinganeni. Kwezinye izimo, izingane zingafakwa kuma-corticosteroids ngemithamo elawulwayo.
Ukusebenzisa i-corticosteroids kungakhuphula ubungozi bokutheleleka. I-Corticosteroids ingasebenza njenge-immunosuppressants, enganciphisa amandla omzimba wakho wokulwa nezifo.
Xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ukuthola ezinye izindlela zokuphepha ngenkathi uthatha i-hydrocortisone noma i-cortisone.
Imibuzo ebuzwa njalo mayelana ne-hydrocortisone vs. i-cortisone
I-Hydrocortisone iyi-corticosteroid esetshenziselwa ukwelapha ukuvuvukala okubangelwa izimo ezahlukahlukene njenge-arthritis, isifuba somoya , kanye nesilonda esilimaza ulcerative. I-Hydrocortisone iyatholakala ngamafomu omlomo nawesihloko. I-topical hydrocortisone isetshenziselwa ukwelapha i-dermatitis yokuxhumana nezinye izifo zesikhumba ezivuthayo. Amagama omkhiqizo we-hydrocortisone afaka phakathi iCortef neHydrocort.
ICortisone iyi-corticosteroid enqunyelwe ukwelapha izimpawu zokuvuvukala ezivela ezimeni ezahlukahlukene. Kuyaziwa nangegama lomkhiqizo iCortone, eliyekile. ICortisone itholakala njengethebhulethi yomlomo engu-25 mg evame ukuthathwa izikhathi eziningi ngosuku izinsuku eziningana kuye ngesimo esiphathwayo.
Ingabe i-hydrocortisone ne-cortisone ziyefana?
I-Hydrocortisone ne-cortisone ngama-corticosteroid asebenza ngokufushane afanayo. Noma kunjalo, azifani. ICortisone iyi-prodrug engasebenzi eguqulwa ibe yi-hydrocortisone, noma i-cortisol, esibindi. I-Hydrocortisone isebenza njengomuthi ohlohlwayo kanti i-cortisone ayisebenzi njengokwelashwa kwezihloko.
Ingabe i-hydrocortisone noma i-cortisone ingcono?
I-Hydrocortisone inamandla kakhulu kune-cortisone (1 mg ye-hydrocortisone ilingana no-1.25 mg we-cortisone). I-Hydrocortisone nayo iyatholakala ngaphezu kwe-counter njengokhilimu wezinhlayiya, i-lotion, noma amafutha we izimo zesikhumba . Udokotela wakho angakunikeza i-hydrocortisone noma i-cortisone ngemuva kokuhlolwa okuphelele kwesimo sakho.
Ngingasebenzisa i-hydrocortisone noma i-cortisone ngenkathi ngikhulelwe?
Ama-corticosteroids anomthamo ophansi kwesinye isikhathi angasetshenziswa ngesikhathi sokukhulelwa. Kodwa-ke, ngenxa yengozi yabo yemiphumela emibi, efana nomfutho wegazi ophakeme, ukukhuphuka kwamazinga kashukela egazini, nokugcina uketshezi, ama-corticosteroids kufanele asetshenziswe kuphela uma izinzuzo zidlula izingozi. Xhumana nomhlinzeki wezokunakekelwa kwezempilo ngokuphepha kwama-corticosteroids ngesikhathi sokukhulelwa.
Ngingayisebenzisa i-hydrocortisone vs. i-cortisone ngotshwala?
Ama-Corticosteroids notshwala akukhuthazwa ukuthi kuthathwe ndawonye. Ukuphuza utshwala njalo kungashintsha amazinga kashukela egazini futhi kuthinte amasosha omzimba. Imiphumela emibi ye-corticosteroids notshwala ingahlangana futhi iholele ezimweni eziyingozi.
Ingabe i-hydrocortisone iyi-corticosteroid?
I-Hydrocortisone iyi-corticosteroid yokwenziwa. Imiphumela yayo ilingisa leyo yeglucocorticoid ekhiqizwa ngokwemvelo, i-cortisol. Uma kuqhathaniswa namanye ama-corticosteroids, i-hydrocortisone ibhekwa njenge-potencyosteroid enamandla amancane.
Yini elapha i-cortisone?
ICortisone isetshenziswa njengesidakamizwa esinqanda ukuvuvukala kanye ne-immunosuppressant. Ingaphatha ukuvuvukala kwezifo zesikhumba, izimo zamaphaphu, ukuphazamiseka komzimba, kanye nokutheleleka. ICortisone nayo ingasetshenziselwa ukwelapha ukusabela okweqile kanye neziqephu ezinzima zesifuba somoya.
Ingabe kufanele uthathe i-Topamax yama-migraines akho?
izinja zingayiphuza yini imishanguzo yokwelapha abantu
lokho okubhekwa njengezinga eliphansi likashukela egazini
isetshenziselwani i-az pack antibiotic
amaphilisi ama-anti nausea aphephile ngesikhathi sokukhulelwa
isikhathi eside ukukhishwa kwe-vyvanse kuhlala isikhathi esingakanani